मह निर्मित "शत्रुगते" को 'रुपै मोहनी' गीत सार्वजनिक ! - Bulbule Khabar
मह निर्मित “शत्रुगते” को ‘रुपै मोहनी’ गीत सार्वजनिक !
काठमाडौ । अत्यन्त प्रतिक्षित रहेको मह संचारले निर्माण गरेको फिल्म ‘शत्रु गते’ को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । केहि दिन अघि मात्र छायाँकन गरिएको गीतलाई नयाँ वर्षको अवसर पारेर सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक ‘रुपै मोहनी’ बोलको गीतमा शब्द लोकराज अधिकारीको रहेको छ भने यसमा संगीत टंक बुढाथोकीले दिएका छन् ।
गीतलाई टंकले मीना निरौलासंग संयुक्त रुपमा गाएका छन् । कविराज गहतराजको निर्देशनमा तयार भएको गीतलाई दिर्घ गुरुङले खिचेका हुन् ।
मदन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य,बसुन्धारा भुसाल, दीपकराज गिरी, किरण केसी, दीपाश्री निरौला, पल शाह, आँचल शर्मा, प्रियंका कार्की, शिवहरी पौडेल, राजाराम पौडेल लगायतका कलाकारहरुको उपस्थिति भएकै कारण पनि फिल्मको चर्चा चुलिएको छ । यस गीतमा तीन पुस्तालाई देखाइएको छ । गीतमा हरिवंश र दीपा , दीपक र प्रियंका तथा पल र आँचलको जोडीलाई दर्शकले देख्न पाउनेछन् ।
मित्र देव गुरुङको सम्पादनमा तयार गीतलाई दर्शककै अनुरुप बनाउने कोशिश गरिएको निर्माण पक्षको भनाइ छ ।
यस फिल्मको प्रमुख निर्मातामा दिपकराज गिरी, दिपाश्री निरौला, नरेन्द्र कन्साकार, रमिला आचार्य, शिव हरी पौडेल, यसोदा श्रेष्ठ रहेका छन । पहिलो फिल्म ‘जात्रा’ मार्फत निर्देशनमा आएका प्रदीप भट्टराईले यस फिल्मलाई निर्देशन गरेका छन् भने कथा हरिबंस आचार्य, पटकथा दिपक राज गिरी र प्रदिप भट्टराई कै रहेको छ । तराईको बिरगन्ज र काठमाण्डौमा छायाँकन गरिएको यस फिल्मलाई दर्शकले चैत्र ९ गते हेर्न पाउनेछन् ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, पुस १४, २०७४ 5:16:05 PM
Prevराष्ट्रपतिद्वारा राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश प्रमाणीकरण
Nextप्रदेश सभामा काँग्रेसका को को भए सांसद ? नामावली सहित